﻿ ​निदाएको बेलामा मान्छे मर्ने कारण यस्तो छ
​निदाएको बेलामा मान्छे मर्ने कारण यस्तो छ
बिबिसी । विख्यात अमेरिकी फिल्म शृंखला ‘स्टार वार्स’की अभिनेत्री क्यारी फिसरको निधनको मुख्य कारण ‘स्लिप एप्निया’ रहेको चिकित्सकहरूले पुष्टि गरेका छन्। निदाएका बेला सास रोकिनुलाई डाक्टरी भाषामा ‘स्लिप एप्निया’ भनिन्छ । निदाएका बेला कैयौंपल्ट केही सेकेन्डका लागि सास फेर्न रोकिन्छ। ६० बर्सकी फिसरको गत वर्ष डिसेम्बर २७ मा निधन भएको थियो । जनवरीमा जारी मृत्युको प्रमाणपत्रमा उनको निधन हृदयघातबाट भएको उल्लेख गरिएको भए पनि चिकित्सकहरूले निधनको सही कारण पत्ता लगाउन सकेका थिएनन्।
कुनै कुनै यस्तो केसमा यो समस्या मस्तिष्कसँग जोडिएको हुन्छ । जतिबेला मस्तिष्कले सुतेका बेला सास फेर्दा प्रयोग हुने मांसपेशीलाई सञ्चालित हुन कुनै संकेत वा आदेश दिँदैन। स्लिप एप्नियाका कारणले मस्तिष्कमा अक्सिजनको कमी हुन्छ र मस्तिष्कले हामीलाई गहिरो निद्राबाट ब्युँझाइदिन्छ । कतिपल्ट त हाम्रो निद्रा पूरै खुल्छ भने कतिपल्ट अर्धनिद्रामा हुन्छौं, तर यी सबै हामीले ख्यालै गर्दैनौं ।
निदाएका बेला घाँटीका मांसपेशी र सफ्ट टिस्युज खुम्चिएर आउनु सामान्य हो र यस्तो सबैलाई हुनसक्छ । तर यसले सबैलाई समस्या उत्पन्न गर्दैन । जसलाई यसले समस्या उत्पन्न गराउँछ, त्यसका निम्न कारण हुन सक्छन् :
१‍. मोटोपन : धेरै मोटो हुँदा घाँटीमा सफ्ट टिस्युज पनि धेरै हुन्छन् । त्यसैले सफ्ट टिस्युज शिथिल हुनासाथ सासनली नै बन्द हुन्छ । पेटमा धेरै बोसो वा ठूलो पेट भएका मानिसलाई पनि स्लिप एप्निया हुनसक्छ।
२. पुरुष : महिलाको तुलनामा पुरुषहरूलाई स्लिप एप्नियाको जोखिम बढी हुन्छ । यसको कारण पत्ता लागि नसके पनि शरीरमा रहेको बोसोसँग यसको सम्बन्ध हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
एउटा अनुसन्धानले स्लिप एप्निया भएको मानिसले सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुने सम्भावना १२ प्रतिशत बढी हुने देखाएको छ । स्लिप एप्नियाका रोगीले सवारी चलाउनु अत्यन्त खतरनाक हुन्छ। ‘पिपुल’ म्यागाजिनलाई फिसरकी छोरी लुअर्डले भनिन्, ‘मेरी आमा जीवनभर लागुऔषधको कुलत र मानसिक बिमारीसँग लडीरहनु भयो र अन्त्यमा त्यसैले उहाँको ज्यान गयो ।’